Schizophrenia waa jirro maskaxeed oo halis ah. Waxaa waxyeeleyso sida aad u aragto dunida iyo sida aad u dhaqmeyso.
Schizophrenia waa jirro maskaxeed beddelo fikirkaaga iyo sida aad u aragto dunida. Waxay ka dhigaysa schizophrenia ka dhigaysa in ay adag tahay si aad u sii fikirradiinna in ay gacanta ku. Waad beddeli kartaa fekerkaaga iyo dareenkaaga iyo sida loo dhaqmo haddii aad leedahay schizophrenia. Dadka intooda badan marka ay yar yar yihiin waalaa.
Qaar ka mid ah isbedel ah in aad leedahay haddii aad leedahay schizophrenia waa cudur:
Saarneyn waa marka aad u malaynayso in ay wax dhab ah marka aan si fiican u. Tusaale ahaan, waxaad u Malayn in qof walba ee ganacsatada isku dayaya inuu guriga kaa saaro oo idin neceb. Tani waxay ka dhigi laga yaabaa in aad dareemayaasha ama xanaaq. Tani waa dhalanteed haddii runta waa in dadka jecel oo aan ninna waxa uu isku dayayaa inuu guriga kaa saaro.
Dhalanteedka ayaa wajaheysa marka wax ma dhacdo. Tusaale ahaan, waxaad maqli karaan dhawaqyada markii Ma jiro nin. Waxaad ka arki kartaa wax oo aan jirin. Waxaad dhadhamin karaa ama urin waxyaalo aan in. waayo-aragnimada Kuwani waa mid aad u dhab ah kuu.
Dareenka jira kharibi markii dareenkaaga aadan tusin. Waxaa laga yaabaa inaad ma uu fiirin dadka isha dambe. laga yaabaa in aad ku hadasho si aad u qunyar ah oo aan dareen. Dareenka ka eegi kartaa kharibi sida haddii aadan ka warqabin waxa ka socda kugu xeeran. Waxaad tusi kartaa dareenka aan dareenka caadiga ah ee xaaladda. Tusaale ahaan, saaxiibkaa sheegayaa sheeko aad u murugo badan. Aadan fahmin baaxadda murugo saaxiibkaa oo aad ku qosli.
Loss of dhiirogelin
Loss of dhiirogelin waa marka aadan haysan tamar si ay u sameeyaan wax kasta oo aad. laga yaabaa in aad rabin in Roob ah ama aad ilkaha aad u nadiifiso.
Iyada oo schizophrenia, dadka qaar ma doonayaan in ay ku wareegsan ay qoyska iyo saaxiibada.
Schizophrenia waxaa keeni kara waxyaabo badan oo. Qaar ka mid ah sababaha laga yaabo inaad qabto schizophrenia waa:
Hiddo waa sifooyin jidhka iyo maskaxda (Sida midabka indhaha) Aad ka hesho waalidkaaga. Laga yaabaa in qof ka tirsan qoyskaaga uu leeyahay schizophrenia.
Kiimikada noole waa kiimiko sida kala duwan ee shaqada jirka.
dhacdooyinka nolosha iyo dhaawacyada waxay keeni kartaa kartaa cudurka dhimirka.
Biological ka dhigan tahay qayb ka mid ah jirkaaga waa. Waxaad heli kartaa isbedel aad maskaxda ka dhigi kara dhaawac fudud waalaa. More nugul ragga schizophrenia.
Isticmaal wax badan oo ka mid ah daroogada waxay keeni kartaa schizophrenia.
Inta badan dadka ay dhibaatadu ka calaamadaha schizophrenia u dhexeeya 16 Oo 30 Year. Calaamaduhu waa dareenka iyo isbedel in aad qabto xanuun dartii. Ma helaysid dad badan oo qaba cudurka dhimirka ka dib 45 Year. Waxaa suurtogal ma aha in lagu daaweeyo daaweyn schizophrenia kaliya. Waxaad u baahan doontaa inaad qaadato daawada uu dhakhtarkaagu kuu qoray.